Fri, Jul 10, 2020 at 11:46am
बिग बोसपछि ‘दशका दम’ लिएर आउँदै सलमान खान
नयादिल्ली, माघ २६ । सलमान खानका प्रसंसकहरुलाई खुसीको खबर रहेको छ । ‘बिग बोस ११’ को सफलतापछि सलमान खान अब नयाँ कार्यक्रमको प्रस्तोता बनेर आउँदै छन्। सलमान फेरि एक पटक कलर्स टेलिभिजनबाट देखिन लागेका हुन्। उनले अब अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी खेल ‘पावर अफ टेन’को भारतीय भर्सन ‘दशका दम’ होस्ट गर्नेछन्। यस शोमा सहभागी प्रतिस्पर्धीहरूले ५ वटा प्रश्नको सही जवाफ दिएमा १० करोड भारतीय..
थाहा पाउनुहोस् को-को हुन् बलिउडका ट्प ५ नायकहरु,
भनिन्छ विश्वमा सबैभन्दा धेरै फिल्महरु भारत तथा नाइजेरियामा बनाईन्छ । बलिउड भारतको सिनेमालाई भनिन्छ जहा धेरै नायक/नायिकाको पहिलो हुने तछाड-मछाड रहिआएको पाईन्छ । बलिउडमा थुप्रै नायकहरु आए कति ले आफ्नो स्थान राख्न सके कतिले १,२ वटा फिल्म खेलेर हराउनु पर्यो। तेसो त बलिउड त्यति सानो बजार पनि हैन जहाँ लाखौंको भिडमा हराउनु स्वभाविक मान्नु पर्छ किनकभने लाखौं बलिउडको बजार जति..
आजदेखि अनमोल र अदितीको परीक्षा, ‘कृ’ मुलुकभरका हलमा प्रदर्शन
काठमाडौं, माघ २६ । यूवा स्टार नायक अनमोल केसी र नवनायिका अदिती बुढाथोकीको परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । नायक अनमोल र नायिका बुढाथोकीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘कृ’ आजबाट रिलिज भएको हो । करिब २ बर्षपछि नायक केसी नयाँ चलचित्रको साथमा दर्शकमाझ आएका हुन् । पहिलो पटक सिने जगतमा डेब्यू गरेकी नवनायिका बुढाथोकीले यस चलचित्रलाई आफ्नो परीक्षाको रुपमा लिएको बताएकी छिन्..
‘सुपर मारीयो’ को एनिमेटेड फिल्म बन्ने
एजेन्सी के तपाइले आफ्नो जीवनमा सुपर मारीयो भिडियो गेम खेल्नुभयो ? हरेक मान्छेले सुपर मारीयोको भिडियो गेम खेलेको अथवा यस्को बारेमा सुनेको त पक्कै होला । सुपर मारीयोका प्रसंसकहरुलाई खुसीको खबर ! सबैको लोकप्रिय सुपर मारीयोको अब फिल्म बन्ने भएको छ । भिडियो गेमको जापानी कम्पनी निन्टेन्डोले ‘सुपर मारीयो’ को एनिमेटेड फिल्म बनाउने घोषणा गरेको छ। इलुमिनेसन इन्टरटेन्मेन्ट, द अमेरिकन फिल्म..
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘सुपर गोर्खे’ बैशाख ७ मा रिलिज हुने
काठमाडौं, माघ २५ । चलचित्र ‘सुपर गोर्खे’को प्रदर्शन मिति सरेको छ । माघमा आउने भनिएको चलचित्र सुपर गोर्खे अब बैशाखमा रिलिज हुने भएको हो । चलचित्र बैशाख ७ गते मुलुकभर प्रदर्शनमा आउने चलचित्र यूनिटले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदर्शन गरिने भनिए तापनि प्राविधिक कारणले गर्दा २०७५ को वैशाख ७ मा सारिएको नायिका तथा निर्मात्री ऋचा सिंह ठकुरीले जानकारी दिइन् । नेपालसँगै अस्ट्रेलियामा..
चलचित्र ’ब्लाइन्ड रक्स’को ट्रेलर सार्वजनिक(भिडियो सहित)
काठमाडौं, माघ २४ । चलचित्र ’ब्लाइन्ड रक्स’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । बेनिशा हमाल र अर्पण थापा स्टारर चलचित्र ’ब्लाइन्ड रक्स’को ट्रेलर मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो । ’चाम्स इन्टरटेनमेन्ट’को प्रस्तुति रहेको चलचित्र दृष्टिविहीन युवती सृष्टि केसीको जीवनमा आधारित छ । उक्त चलचित्रमा नायिका बेनिशा हमालले मुख्य भूमिका अर्थात् सृष्टि केसीको चरित्र निर्वाह गरेकी छिन् । सार्वजनिक ट्रेलरमा सृष्टिको सफलताको कथा..
चलचित्र ‘पञ्चायत’को ट्रेलर सार्वजनिक, २०३३ सालको पञ्चायत व्यवस्थालाई चित्रण
काठमाडौं, माघ २३ । चलचित्र ‘पञ्चायत’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजना भएको एक विशेष कार्यक्रमका बीच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । ट्रेलरमा २०३३ सालको पञ्चायत व्यवस्थालाई चित्रण गरिएको छ । चलचित्रको कथा, पटकथा, संवाद तथा निर्देशन शिवम अधिकारीको रहेको छ । चलचित्र ‘पञ्चायत’ मा अभिनेता सरोज खनाल, नायिका निता ढुंगाना, अभिनेत्री रुपा राना, कलाकारहरू गणेश गिरी, जान्वी बस्नेत, विशाल पहारी,..
अमिताभ-रेखाको लभस्टोरी जानेपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ - प्रेम प्राप्ति मात्रै होइन !
भ्यालेन्टाइनस् डे को अवसरमा जान्नुहोस त्यो बलिउडको लभस्टोरी को बारेमा जस्को सार्बजनिक रुपमै ठुलै चर्चा भएको थियो । उनीहरुको माया जुन कहिल्यै मिलन भएन तर यो माया को बारेमा सबै तिर हल्ला थियो । यो यस्तो पिरतीको कथा हो जस्को जादुको बयान बितेका ति पलहरुले पनि गर्न सक्दैनन् । बलिउडमा जब जब माया पिरतीका कथाहरु भनिन्छन् तब यी दुइको नाम..
मौलिक सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित फिजिकल नाटक ‘विच’
काठमाडौं, माघ २२ । राजधानीको डिल्लीबजारस्थित सर्वनाम थिएटरमा यही माघ १९ गते देखि २७ गते सम्मका लागि नाटक ‘विच’ मञ्चन सुरु भएको छ । अमेरिकी रङ्गकर्मी पिटर सेफर्थको निर्देशनमा बनेको यस नाटक विच अर्थात बोक्सीमा आर के महत रोषहान, सम्राट थापा, रोषनी स्याङ्गबो र मनि के राई लगायतको अभिनय रहेको छ । डाँफे थिएटर र फर्मेशन थिएटरको सँयुक्त पहलमा निर्मित यस नाटकमा..
चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’ को छायाँकन फागुन १५ गतेबाट सुरु हुने
काठमाडौं, माघ २१ । चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’को यहि फागुन १५ गतेबाट छायाँकन सुरु हुने भएको छ । आइतबार चलचित्रको औपचारिक रुपमा घोषण गर्दै चलचित्र यूनिटले चलचित्रको छायाँकनको बारेमा जानकारी दिएको हो । सञ्चारकर्मी सुव्रत आचार्यको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्रमा नायक सलोन बस्नेत र नायिका सारा श्रीपालिको मुख्य भूमिका रहने छ । चलचित्रलाई रमेश त्वायनाले निर्माण गर्न लागेका हुन् । विज्ञान राई, नुनमा सुब्बा..
चलचित्र ‘नाका’ को ट्रेलर सार्वजनिक, ट्रेलरमा विपिनको फरक अवतार (भिडियो)
काठमाडौं, माघ १९ । चलचित्र ‘नाका’को ट्रेलर शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । अभिनेता विपिन कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रको ट्रेलर शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गरिएको हो । प्राय फरक भूमिकामा प्रस्तुत हुने विपिनलाई ‘नाका’को ट्रेलरमा फरक अवतारमा देखाइएको छ । ट्रेलरमा विपिनलाई नाका अर्थात सीमानाको गुन्डाको पात्रका रुपमा देख्न सकिन्छ । विभिन्न अवैध धन्दा र गुण्डागर्दीको विषयलाई चलचित्र नाकाको ट्रेलरमा..
रिलिज पश्चात पनि पुनः विवादमा तानियो ‘पद्यमावत’
एजेन्सी, माघ १८ । लामो समयको विवाद पश्चात् गत बिहीबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘पद्मावत’ पुन विवादमा तानिएको छ । बक्स अफिसमा धमाका मच्चाइरहेको यो चलचित्रमा रानी ‘पद्मावती’को जीवनीलाई गलत तरिकाले देखाएको भन्दै राजपुत समाजको समूह करनी सेनले प्रदर्शन गरे पश्चात् अझै भारतका केही हलहरूमा प्रदर्शन भएको छैन । यति बेला उत्तरप्रदेशको मथुरा जिल्लामा रहेको ब्रजमण्डल क्षेत्रीय राजपुत महासभाका पदाधिकारीहरूले ‘पद्मावत’ निर्देशक सञ्जय लीला..
चलचित्र ‘ड्रिम गर्ल’ यूनिट छायाँकनमा व्यस्त, हाल थाइल्याण्डमा
काठमाडौं, माघ १७ । चलचित्र ‘ड्रिम गर्ल’ यूनिट यति बेला चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त छ । सुटिङकै शिलशिलामा चलचित्र यूनिट हाल थाइल्याण्डका विभिन्न स्थानहरुमा पुगेको छ । निर्देशक ऋषिराज आचार्यको नयाँ चलचित्र ‘ड्रिम गर्ल’ को राजधानीबाट करिब दुइ महिना अघिदेखि सुटिङ शुरु गरिएको थियो । ड्रिम गर्ल युनिट पोखरा, चितवन हुँदै रारा तालसम्म पुगेको थियो । स्वदेशमा खिच्नुपर्ने दृश्य सबै सकेर एक साताअघि थाइल्यान्ड..
चलचित्र ‘लिलिबिलि’ अन्ततः चैत्र ३० मै प्रदर्शनमा आउने
काठमाडौं, माघ १६ । चैत्र ३० बाट वैशाख १४ मा सारिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘लिलिबिलि’ अन्ततः चैत्र ३० मा नै आउने भएको छ । नायक प्रदीप खड्काको मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र लिलीबिली सुरुमा चैत्र ३० मा आउने भनिए पनि बलिउडको प्रतिक्षित चलचित्र ‘२.०’ आउने भएसँगै चलचित्रको मिति सारिएको थियो । तर अहिले बलिउड चलचित्रको प्रदर्शन मिति पोस्टपोन्ड भएसँगै चलचित्र लिलिबिलि चैत्र ३० मै..
दीपिका र कट्रिना कैफ बीचको झगडा, बिहेमा कट्रिनालाई निषेध !
काठमाडौ, माघ १६ । चर्तित बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र कट्रिना कैफबीचको झगडा सतहमै छताछुल्ल भएको छ । यति बेला बलिउड गसिप बजारमा यी दुईको नायिका दीपिका र कट्रिना कैफ बिचको झगडाले चर्चा पाइरहेको हो । हालै दीपिकाले आफ्नो बिहेमा कट्रिनालाई नबोलाउने सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि यतिबेला उनीहरुवीचको दुश्मनी अझै बढेको देखिएको छ । यतिबेला दीपिका र अभिनेता रणबीर सिंह बिचको प्रेमसम्बन्ध कोही..
चलचित्र ‘पद्यमावत’ चार दिनमा सय करोडको क्लबमा
काठमाडौं, माघ १५ । लामो समयको विवाद पछि बिहीबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘पद्मावत’ले यति बेला सिनेमा हलमा धमाका मच्चाउन सफल भएको छ । भन्सालीको अन्य चलचित्रको भन्दा दुई गुणा बढी ‘पद्मावत’ले कमाई गरेको भारतीय मिडियाले जनाएको छ । चलचित्रले पहिलो चार दिनमा १०० करोड भारुको कमाई गरेको छ । रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूरको मुख्य भूमिका रहेको ‘पद्मावत’ले पहिलो दिन २०..
चलचित्र ‘साढे ७’ को दोस्रो ट्रेलर सार्वजनिक, ट्रेलरमा थ्रीलर, स्ट्रगललाई चित्रण
काठमाडौं, माघ १४ । फिल्म ‘साढे ७’ को दोस्रो अफिसियल ट्रेलर शुक्रबार बेलुका साढे सात बजे इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिएको छ । साम्तेन भुटिया निर्दे्शित यस फिल्मको ट्रेलरमा थ्रीलर, सस्पेन्स र स्ट्रगललाई देखाइएको छ । राजनीतिक आन्दोलन रिपोर्टिङका लागि तराई पुगेको एक फोटो पत्रकारको भौतिक र मनोवैज्ञानिक द्धन्द्ध फिल्मको कथावस्तु हो । चर्चित गायक सत्यराज आचार्यले फिल्मको मुख्य भूमिका निभाएका छन् । फिल्ममा सत्यसंगै..
प्रेमको प्रतीक ऐतिहासिक दरबार 'रानीमहलमा' आधारित चलचित्र बन्ने
काठमाडौँ, १२ माघ । त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित ‘रानीमहल’ नामक चलचित्र निर्माण गरिने भएको छ । स्वस्तिक फिल्मस् प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुने उक्त चलचित्रमा अति नै मित्रता रहेका दुई साथीका बीचमा एक युवतीको प्रवेश भएपछि उनीहरुको सम्बन्धमा आएको चिसोपनका साथै प्रेमी र पे्रमिकाबीच हुनुपर्ने निःस्वार्थ भावना र सहयोगका बारे सन्देश दिन खोजिएको छ । वरिष्ठ कलाकार नीर शाह, शेष राणा, प्रशान्त ताम्राकार तथा नयाँ कलाकार..
अनामनगरस्थित मण्डला नाटकघरमा ‘भागवत–टोलमा भोलाराम’ मञ्चन आरम्भ
काठमाडौं, माघ ११ । मण्डला नाटकघरको प्रस्तुति रहेको नाटक ‘भागवत–टोलमा भोलाराम’ को मञ्चन सुरुवात गरिएको छ । यसै माघ १० गते बुधबारका दिनदेखि सुरु भएको यस नाटकलाई आगामी माघ २१ गतेसम्म राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला नाटकघर गएर हेर्न सकिने छ । प्रसिद्ध नाटककार विजय विष्फोटको लेखन, परिकल्पना तथा निर्देशन रहेको यस नाटक सोमबार बाहेक हरेक साँझ ५ बजे मञ्चन सुरु हुनेछ । त्यस्तै,..
नायक सौगातको चलचित्र ‘पञ्चेबाजा’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं, माघ ११ । चलचित्र ‘पञ्चेबाजा’ ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बुधवार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । समाजको यथार्थता बोल्ने मौलिक कथामा निर्माण भएको चलचित्रमा अभिनेता सौगात मल्ल, कर्म शाक्य, बुद्धि तामाङ, सृजना सुब्बा, जस्मिन श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । फागुन ११ गते प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्रलाई घनश्याम लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् । प्रदीप भारद्धाजको कथा..
नायिका श्वेताको ‘कान्छी’को ट्रेलर सार्वजनिक (ट्रेलर सहित)
काठमाडौं, माघ ९ । नायिका श्वेता खड्काको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘कान्छी’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । दरबारमार्ग स्थित क्यूज सिनेमामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । आकाश अधिकारी निर्दे्शित फिल्मको ट्रेलरमा हरेक उमेर समुहका दर्शकलाई लक्षित गरिएको छ । चलचित्र ‘कान्छी’ मा श्वेता र अभिनेता दयाहाङ राईको मुख्य भूमिका रहेको छ । आगामी फागुन ५ गते बाट प्रदर्शनमा आउने..
आमिर खानको फिल्म ‘सिक्रेट सुपरस्टार’ हेर्न छिमेकी देश चीनमा दर्शकको भीड
मुम्बई, माघ ९ । बलिउड सुपरस्टार आमिर खान अभिनित फिल्म ‘सिक्रेट सुपरस्टार’ यसै हप्ताको शुक्रवारबाट चीनमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । रिलिजको पहिलो दिन नै यो फिल्मले आमिरको फिल्म ‘दंगल’को रेकर्ड समेत तोड्न सफल भएको हो । चीनमा प्रदर्शनको दोस्रो दिनमा यस फिल्मले सय करोड विजनेश कलेक्शन गरेको बताइएको छ । शुक्रबारदेखि चीनमा प्रदर्शन भएको उक्त फिल्मले दुई दिनमा ११०.५२ करोड कलेक्शन..
सुव्रत आचार्यको ‘सुश्री सम्पत्ति’ मा सलोन र साराको जोडी बाँधिदै
काठमाडौं, माघ ७ । नव नायिका सारा श्रिर्पाइली र नायक सलोन बस्नेतलाई लिएर कमेडी चलचित्र बन्ने भएको छ । रंग पत्रकारका साथै चलचित्र ‘अधकट्टी’ निर्देशन गरेका सुव्रतराज आचार्यले नयाँ चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’ निर्देशन गर्न लागेका हुन् । उनले नायक सलोन र नव नायिका श्रिर्पाइलीको जोडीमा ‘सुश्री सम्पत्ति’ बनाउन गर्न लागेका हुन् । चलचित्रमा सारा र सलोन बाहेक विनोद न्यौपाने, प्रमोद अग्रहरि, विशारद..
सर्वनाममा नाटक ‘काशीदेवी’ मञ्चन जारी, सत्यघटनामा आधारित कथावस्तु
माघ ५ काठमाडौ । राजधानीको डिल्लीबजार, कालिकास्थानस्थित सर्वनाम थिएटर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित नाटक ‘काशीदेवी’ लिएर आफ्ना दर्शकमाँझ प्रस्तुत भएको छ । मुलधारका अलावा फरक धारका विषयवस्तुहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको सर्वनामले यसपटक निकै मर्मस्पर्शी कथावस्तुमा आधारित ‘काशीदेवी’ मञ्चन गरेको हो । निराजन झाको लेखन रहेको यस नाटकको परिकल्पनाकार एवम् निर्देशक सरिता साह हुन् । यस नाटकको मुख्य पात्र अर्थात काशीदेवीको..
क्रिसको चौथो सिक्वेल पनि बन्दै, २०२० मा रिलिज हुने
एजेन्सी, माघ ४ । बलिउड चलचित्र क्रिसको चौथो सिक्वेल पनि बन्ने भएको छ । गत हप्ता निर्देशक राकेश रोशनले आफ्नो छोरा अभिनेता ऋतिक रोशनको जन्मदिनमा चलचित्र निर्माणसँगै रिलिज मिति घोषणा गरेका हुन् । चलचित्र २०२० को डिसेम्बर ४ मा रिलिज हुने बताइएको छ । यसका अघि कोही मिल गया, क्रिस, क्रिस २ र क्रिस ३ रिलिज भइसकेको छ । यी सबै चलचित्रलाई राकेश..
पत्रकारले ‘प्रियंका कार्की र प्रदिप खड्का’ लाई दिदी–भाई भनेपछि......
काठमाडौं, माघ २ । हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा नायिका प्रियंका कार्की पत्रकारहरुसँग ‘फायर’ भएकी छिन् । पत्रकारले नायक प्रदीप खड्कासँग आफ्नो उमेरको तुलना गरेकोमा प्रियंका आक्रोशीत भएकी हुन् । सोमबार राजधानीमा उनी अभिनित चलचित्र लिलिबिलीको पहिलो गीत रिलिज कार्यक्रममा उनलाई पत्रकारका तर्फबाट ‘आफूभन्दा कम उमेरको नायक भाइसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?’ भनेर सोधिएको थियो । उक्त प्रश्नको जवाफ..
सेन्सरको कैंची : चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ हेर्न अभिभावकको मन्जुरी जरुरी
काठमाण्डौ पौष २७ । चलचित्र ‘बटरफ्लाई’लाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले ‘पिजी’ सर्टि्फिकेट दिएको छ । पुष २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको यो चलचित्र मंगलवार मात्र सेन्सरमा गएको हो । सेन्सर बोर्डले चलचित्रलाई प्यारेन्टल गाइडलाइन्स सर्टि्फिकेट दिएको छ । १६ वर्ष उमेर मुनिकाले अब ‘बटरफ्लाई’ हेर्न अभिभावक लिएर जानु पर्ने भएको छ । ‘गाउँदिन अब गीत गजल’ बोलको गीतबाट चर्चामा रहेको यो चलचित्रमा..
बलिउड फिल्म ‘पद्यमावती’ र ‘प्याड म्यान’का कारण ‘ह्याप्पी डेज’को प्रदर्शन मिति सर्यो
काठमाडौं, पौष २५ । नेपाली सिने जगतका चर्चिच अभिनेता दयाहाङ राई, अभिनेत्री प्रियंका कार्की र संजय गुप्ता अभिनित चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’ को प्रदर्शन मिति पोस्टपोन्ड भएको छ । आगामी माघ १२ गते अर्थात जनवरी २६ तारिखका दिन चलचित्र रिलिज गर्ने भनिए पनि दुई ठुला बलिउड चलचित्र सोही मितिमा प्रदर्शनमा आउने भए पनि ह्याप्पी डेजको प्रदर्शन मिति पोस्टपोन्ड भएको हो । माघ १२ गते..
पृथ्वी जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा शिल्पी थिएटरले ‘राजेन्द्रलक्ष्मी’ ल्याउँदै
काठमाडौं, पुस २४ । राजधानी काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरले नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वी नारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आफ्नो नयाँ प्रस्तुती ‘राजेन्द्र लक्ष्मी’ नाटक मञ्चन गर्ने भएको छ । प्रसिद्घ साहित्यकार प्रचण्ड मल्लको ऐतिहासिक लेखन रहेको “राजेन्द्र लक्ष्मी” लाई शिल्पीले पृथ्वी जयन्ती पूर्वसन्ध्या अर्थात पुस २६ गतेबाट स्टेजमा ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रदिप खड्गीको निर्देशनमा आउँदै गरेको यस ऐतिहासिक नाटकमा ..
भक्तपुरमा दशैको गीत खिच्दै चलचित्र ‘निर्जला’ को छायाँकन सकियो
काठमाडौं, पौष २३ । भक्तपुरको घ्याम्पे डाडामा दशैंको गीत खिच्दै फिल्म चलचित्र ‘निर्जला’को सम्पूर्ण छायाँकन सकिएको छ । नारी प्रधान चलचित्रको सम्पूर्ण छायाँकन दशैंको गीत खिच्दै सकिएको चलचित्र युनिटले बताएको छ । दिनेश सुवेदीको शब्दमा बाबुल गिरीको संगीत समावेश दशैं स्पेशल गीतमा सुजता बर्मा र बाबुलले आवाज दिएका छन । गीतमा किशोर खतिवडा, शुभेच्छा थापा, निक्स शर्मा फिचरिङ छन् । राजु गिरीको निर्देशनमा..
Results 550: You are at page 15 of 19